I-ANC iyalele uNgqongqoshe ukuba ahoxise ukuqashwa kabusha kukaMolefe - Umbiko | News24
I-ANC iyalele uNgqongqoshe ukuba ahoxise ukuqashwa kabusha kukaMolefe - Umbiko
Johannesburg – I-African National Congress (ANC) iyalele uNgqongqoshe wamaBhizinisi kaHulumeni uLynne Brown kanye nebhodi lakwa-Eskom ukuba bahoxise isinqumo sokubuya kukaBrian Molefe njengesikhulu esiphezulu kule nkampani.
UMolefe, owesula njengesikhulu esiphezulu kule nkampani ngonyaka odlule kulandela umbiko kaThuli Madonsela we-State Capture, usebuyiselwe esikhundleni sakhe.
NgoLwesibili kuvele umbiko wamaBhungane oshicilelwe ku-Eyewitness News omayelana noMolefe kanye noSihlalo webhodi lakwa-Eskom uBen Ngubane othi bacindezela lowo owayenguNgqongqoshe weziMayini uNgoako Ramatlodi ukuba afakele ingcindezi inkampani yakwaGlencore ukuze kuqinisekiswe ukuthi inkampani yakwaGupta ithatha izintambo emayini yamalahle i-Optimum.
OLUNYE UDABA: UMaimane usephumele obala ngendlela azizwa ngayo ngombhalo kaZille
Abakwa-Eskom bazichithile nokho lezi zinsolo kodwa abahlaziyi bakholelwa ukuthi baningi abanye ongqongqoshe abangase baphumele obala ngezinsolo ezithinta umndeni wakwaGupta nobudlelwane abanawo nezinkampani zikahulumeni, amalungu eKhabhinethi kanye noMengameli Jacob Zuma.
Khonamanja, iDemocratic Alliance ibabele enkantolo ifuna kuhoxiswe isinqumo sokubuyela kukaMolefe kwa-Eskom.